Fangatahana mba ‘Hieritreretana Izao Tontolo Izao Amin’ny Fomba Hafa’ Iray Taona Taorian’ilay Famonoana Faobe Tao Amin’ny Trano Fiahiana Japoney · Global Voices teny Malagasy
Fangatahana mba ‘Hieritreretana Izao Tontolo Izao Amin'ny Fomba Hafa’ Iray Taona Taorian'ilay Famonoana Faobe Tao Amin'ny Trano Fiahiana Japoney
Voadika ny 02 Aogositra 2017 9:11 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, русский, Italiano, Português, Español, 日本語, English
Sachiko, mpanamboatra taratasy ary mponina ao amina trano iray fiahiana olona manana fahasembanana, manapaka taratasy iray nosoratan'ilay ahiahiana ho nanao ilay famonoana faobe ratsy indrindra tao Japana hatramin'ny Ady Lehibe II mba hanaovana taratasy. Pikasary avy amin'ny YouTube.
26 Jolay, manamarika ny naha-iray taonan'ilay famonoana olona sembana ara-tsaina miisa 19 tao amin'ny trano iray fiahiana tao Sagamihara, dimapolo kilaometatra andrefan'i Tokyo. Raha toa ka niaiky ny famonoana mponina 19, ary nandratra 26 hafa tamin'ny famelezana tamin'ny antsy nomanina ary natao tamin'ny fomba voarindra tao amin'ilay trano fiahiana i Uematsu Satoshi, ilay olona ahiahiana, mbola tsy nentina teny amin'ny fitsarana kosa ny raharaha.
Asongadin'ny famonoana tao Sagamihara sy ny fifanakalozan-kevitra nasionaly ny tsy firaharahiana matetika ireo olona manana fahasembanana ao amin'ny fiarahamonina Japoney —na ny tsy fahampian'izany. Napetraky ny polisy tany an-toerana ihany koa ny fandraràna fanoratana mikasika ireo niharam-boina izay sembana daholo, mahatonga ny firesahana ireo famonoana tao amin'ilay trano fiahiana tao Sagamihara ho sarotra kokoa.
Uematsu Satoshi, ilay ahiahiana amin'ilay raharaha sy niaiky ireo famonoana, dia mpiasa taloha tao amin'ilay trano fiahiana. Nahatakatra ilay trano fiahiana fa loza mananontanona ho an'ireo mponina izy, ary nandroaka azy talohan'ilay fanafihana. Efa nanambara ny fikasany hamono mponina ao amin'ilay trano i Uematsu tao anatinà taratasy nalefany tany aminà mpanao politika tao an-toerana. Tao anatin'ilay taratasy, izay azo vakiana manontolo eto, nanipika tsara ny fikasàny hamono mponina tao amin'ilay trano fiahiana i Uematsu, ary nanambara fa ”tsy miteraka afa-tsy fahoriana irery ihany ireo sembana” ary tokony ho fongorana daholo izany rehetra izany. Tsy noraharahiana ilay taratasy.
Ho valin'ny taratasy nalefan'i Uematsu, ary ho mariky ny faha herintaonan'ilay famonoana tao Sagamihara, L'Arche, fikambanana iraisam-pirenena tsy mitady tombotsoa natokana ho an'ny fanatsaràna ny fiainan'ireo olona miaina miaraka amin'ny fahasembanana ara-tsaina, dia namokatra ny #As I Am: Nineteen Paper Cranes, lahatsary iray fohy ety anaty tranonkala :
Novokarin'ny L'Arche Japan ity lahatsary ity, izay mitantana vondrona trano ho an'ny olona manana fahasembanana ao amin'ny Prefektioran'i Shizuoka, mifanila toerana amin'ny Prefektiora Kanagawa izay nitrangan'ireo famonoana tao Sagamihara. Ahitana vehivavy iray ilay lahatsary fohy, Sachiko, mponina iray ao amin'ilay trano izay manamboatra taratasy nentim-paharazana Japoney.
Taorian'ny dona noho ny nahenoana mikasika ireo famonoana tao Sagamihara tamin'ny 26 Jolay 2016, ary ny nandrisika an'i Uematsu Satoshi, ilay ahiana ho mpamono, namaly tamin'ny fanaovana vano miisa 19 vita avy amin'ny taratasy Japoney i Sachiko sy ireo mpiara-belona aminy ao amin'ilay trano fiahiana—vano iray isaky ny olona maty novonoina tao amin'ny trano fiahiana tao Sagamihara. Vano nataon'i Sachiko avy tamin'ny (fax) dikamitovin'ilay taratasy nalefan'i Uematsu ho an'ny mpanao politika tany an-toerana, izay niadiany hevitra mikasika ny tsy misy ilàna ny olona sembana.
Mifarana miaraka amin'ireto teny ireto ilay lahatsary, ”Eritrereto amin'ny fomba hafa izao tontolo izao,” ary koa mangataka ireo mpijery mba hametraka fanontaniana amin'ny eritreriny mikasika ireo olona miaina miaraka amin'ny fahasembanana.
Ampahany amin'ilay andian-tsarimihetsika an'aterineto #As I Am novokarin'ny L'Arche ilay lahatsary, izay natao mba hanasongadinana ny fiainan'ireo olona miaina miaraka amin'ny fahasembanana manerana izao tontolo izao.
Tao anatin'ny fanehoankevitra iray tao amin'ny Youtube, manambarana ny solontenan'ny L'Arche, ”Nanao ity Sarimihetsika An'aterineto ity izahay satria inoanay fa miaina amin'ny aloky ny jery maharitra –hita amin'ny kolontsaina rehetra– ireo olona manana fahasembanana hoe tsy misy ilàna azy izy ireo. Iray amin'ireo tsy rariny eto amin'ity tanintsika ity io. Iray amin'ireo azontsika ovaina.”
Hong Kong (Shina) 2 andro izay
Shina 5 andro izay